मिलन संग्रौला print
मामुबाबाको अघि केही नभ’को देखाउनु झन् कस्तो कष्ट मलाई? परिवारका चारै जना भेला हुने उही बेलुकीको खाना खाने समय। यो दश मिनेटमा आफूमा कुनै पनि किसिमको वेदना लुकेको छैन भन्ने देखाउने प्रयत्न मेरो। गालाहरू तन्काएर हाँसोको भाव र अभिनय मुहारमा उतार्ने प्रयास मेरो। भित्र एकथोक बाँचेर बाहिर अर्को रूप देखाउनु जत्तिको कष्टप्रद अभिनय अर्को नहोला सायद। कोठाभित्र पस्नासाथ मुक्ति मिल्यो मलाई, त्यो कष्टप्रद अभिनयबाट। मान्छे आफू जे हो, त्यही बाँच्नुमै आनन्द पाउँदो रहेछ। अब मलाई घोप्टो परेर रुनमै ‘थ्यो आनन्द। नानाथरी कल्पना आए दिमागमा। नरोई एक क्षण पनि नसक्ने रहन।
ऋतुलाई समेत बदली हुन केही महिना चाहिन्छ। दिन रातमा र रात दिनमा ढल्किन पनि धेरै पला र सुईहरू घुम्नुपर्छ तर छिनको छिनमै छेपारोको रङ्गभन्दा झिमिक्क बदली भयौ तिमी। किन? कति पक्का ढलान ठान्थेँ प्रेमको? एक्कासि गलम्र्म ढलिगयौ तिमी। कसरी?
अस्तिसम्मको मेरो राजा, मेरो हिरो, मेरो मायालु तिमीलाई अब निठुरी, धोकेबाज र पापीको दर्जा दिँदै सम्झन थालेँ। जथाभावी खेल्ने कुराको मैदान भो मन। आफूखुशी सोच्ने छुटको फाइदा लुट्न व्यस्त भो दिमाग।
भड्किएको उक्त दिमागलाई तह लगाउने ज्ञान खोई ममा? साढे तेह्र वर्षे स्कुले जीवनमा मलाई धेरै ज्ञान दिलाइयो। म पनि सिकेको भानमा कत्ति रमिरहेँ तर खोई कहाँ काम आए ती ज्ञानहरू? प्रेमको यो अवस्थिति आउँदा सुल्झाउने तरिका खोई कसले सिकायो? जिन्दगी नै अन्त्य गर्छु भनेर निर्णय गर्न लागेको मूर्ख दिमागलाई अल्मल्याउने ज्ञानको औजार खोई कसले आविष्कार ग¥यो?
साँच्चै! मृत्युको प्वाल बिस्तारै बढ्दै थियो। त्यो प्वालबाट छिरेको सानो प्रकाशले मलाई उन्मुक्तिको बाटो देखाइरहेको भान हुँदै‘थ्यो। योभन्दा अर्को विकल्पको बाटो भेट्याउन मन असफल हुँदै‘थ्यो।
कति रुनु? कति पिट्नु यो कमलो छाती? कति टोक्नु ठुटे भइसकेका यी नङ? कति अह्रयाउनु मुठीहरू? आँखा चिम्म गरेर कति चुडाउनै खोज्नु आँखाका नसाहरू? कति सासै रोकेर फुटाउन खोज्नु मुटु? सारा प्रयत्नहरूसँग हार मानेँ मैले। यिनै हारहरूको टेको टेकेर उद्धार गर्न अगाडि आइपुग्यो मृत्यु।
दिमागमा अचानक पहिले कतै पढेको समाचार झुल्कियो। मेरै ब्याचमा एसएलसी फेल भएर देशभरिका चार जनाले आत्महत्या गरेका थिए। कति काँतर सम्झेकी थिएँ, तिनीहरूलाई त्यसबखत मैले? जाबो एसएलसीमा फेल हुने तिनीहरू? तर यहाँ प्रेममा फेल भएँ म। जिन्दगी नै गुल्टिएको लाग्यो मलाई। कसरी सम्हालिऊँ अब म?
उता प्रेमको त्यो धागो चुँडियो, यता म मृत्युको धागो उन्न थालेँ। तीनवटा सल एकआपसमा दोहोरी पारेर गाँठो पारेपछि निकै दह्रो भो। कुर्सीमा चढेर फ्यानका लागि निकालिएको हुकमा सजिलै बाँध्न सकिने लम्बाइको भयो त्यो।
कुर्सीमा चढेँ बिस्तारै। खुट्टा कामे लुगलुगी। कतिसम्म कमजोर भइछु म? नातागतले कुर्सीबाटै ढलाउलाजस्तो भो तर त्यसलाई परास्त गर्ने तागत जसरी पनि निकाल्नु ‘थ्यो मलाई। नत्र कसरी पार पाउनु मैले, त्यो कष्टदायी जिन्दगीबाट? सारा जिन्दगी अँध्यारोमा रुमलिइरहेका बेला उज्यालोको सानो अंश बोकर आएको मृत्युलाई नअँगालूँ कसरी?
जेनतेन सलहरूले बनेको त्यो लठारोलाई हुकमा कसेँ। त्यसपछि कुर्सीमै उभिएर सललाई सुर्कनी पार्न थालेँ। दाम्लोको यस्तै सुर्कनी पारेर मामाले बोको बाँध्नुहुथ्यो। मृत्युको मुखमा कहाँबाट मावल सम्झिएँ फेरि? तर त्यता धेरै बेर अलमलिनु थिएन मलाई, सिवाय सुर्कनी।
अभरै परेपछि देखेको दृश्य पनि ज्ञान भएर आउँदो रहेछ। एकै प्रयासमा सुर्कनी तयार पार्न सफल भएँ। अब लठारो झुन्डियो तुर्लुङ्ग। कुर्सीमा उभिएर मात्र भेटियो अब त्यो। यसमा टाउको छिराएर कुर्सी ठेलेपछि कुनै पनि हालतमा भुइँ नछोइने अड्कल गरेँ मैले। अब तयार भएँ, म तिम्लाई सजायँ दिन। ढुक्क भएँ मेरो मृत्युको खबर सुनेपछि तिमी तड्पिएको दृश्य सम्झेर। लाग्यो, अब केही बेरमा सारा तनाव र कष्टबाट मुक्त हुँदै छु। साथसाथै लिँदै छु, प्रेमको प्रतिशोध पनि।
(बुकहिलद्वारा प्रकाशित चैत्र २३ गते सार्वजनिक हुने उपन्यास पर्पलाको अंश।)
मंगलबार, चैत्र २२, २०७३ १६:३९:४१